Comic fact – ZEUS Myanmar
Category: Comic fact
Character Info Comic fact Marvel MCU
MCU ရဲ့နောက်ထပ် ချစ်စရာ pet လေးဖြစ်လာဦးမယ့် Luck the Pizza dog
No Comments on MCU ရဲ့နောက်ထပ် ချစ်စရာ pet လေးဖြစ်လာဦးမယ့် Luck the Pizza dog
Marvel ဟာ SH တွေကို သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ pet လေးတွေနဲ့အတူ တွဲပေးတတ်ပါတယ်။ MCU မှာဆိုရင်လဲ Captain Marvel ရဲ့ Alien ကြောင်လေး Goose ဟာဆိုရင် fan တွေတော်တော်သဘောကျခဲ့တဲ့ကောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု Hawkeye series ဟာသိပ်မကြာခင်နာရီပိုင်းလောက်ကထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ Kate Bishop အဖြစ် Hailee Steinfeld / Hawkeye အဖြစ် Jeremy တို့အပြင် ခွေးလေး ၁ ကောင်ကိုလဲ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
သူကတော့ Lucky the pizza dog ဆိုတဲ့ Hawkeye ရဲ့ခွေးလေးနေရာကနေသရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Comic ထဲမှာတော့ #Luckythepizzadog လေးဟာ Clint ၁ ယောက် Tracksuit Mafia တွေစီကနေ ကယ်တင်ထားတဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံး မရှိတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်က မူရင်း Arrow ပါ။ ဒါပေမယ့် Clint က Lucky လို့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ Lucky က Pizza အသေကြိုက်တော့ Lucky the Pizza Dog ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်။
Goose လို Alien မျိုးစိတ်မျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ရဲရင့်တဲ့ခွေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမရှိပေမယ့် ရန်သူကို ခြေရာခံနိုင်တာမျိုး abilitiy ရှိပါတယ်။
နောက်တော့ Clint စီကနေတဆင့် Kate စီပါသွားတယ်။
အခု Disney+ မှာလာမယ့် “Hawkeye” series ရဲ့ #LuckyThePizzaDog နေရာသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ခွေးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Jolt လို့ခေါ်ပါတယ်။
U.S Agent အကြောင်း
No Comments on U.S Agent အကြောင်း
အခုတင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Marvel ရဲ့ Anti-hero တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ U.S agent Character အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
MCU ရဲ့ falcon and the winter soldier Seiresတွင်လည်း ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
characterအကြောင်းးကိုတော့ link ထဲတွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
U.S Agent/John F.Walker (Earth-616) Prime Earth
U.S Agent ကို Mark Gruenwald နဲ့ Paul Neary တို့ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး First Appearance အနေနဲ့ Captain America#323( November,1986) မှာစတင်ပဲထုတ်ခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။
Captain America#323 မှာ John F.walker ကို U.S Agent အနေနဲ့ပါဝင်စေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး.
First Appearance မှာ U.S agent ကို Super Pariot အနေနဲ့ ပွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Cap နဲ့ personal အရလိုက်ပြိုင်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်သဖွယ် ပွဲထုတ်ခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း Captain Amereica #333 မှာ 90’s လောက်ကmarvel comics fan တွေကို ရင်ထိတ်သွားစေခဲ့တဲ့ Comic …တစ်နည်းအားဖြင့် Steve Rogers Captain America ဘဝကနေ အနားယူသွားတဲ့ အခါ John Walker ဟာ Captain America ဖြစ်လာပါသေးတယ်။
အဲ့နောက်မှာမှ John Walker ဟာ U.S agent ဆိုပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်.. Captain America #354(June.1989) မှာ U.S agent ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Story of John Walker
John Walker ဟာ Caleb Walker နဲ့ Emily Walker တို့ကမွေးဖွားတာလာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ ရည်မှန်းချက်က သူအားကျရတဲ့သူ့အကို michael လိုမျိုး အရမ်းတော်တဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ..
သူ့ရဲ့ Story ပုံစံတွေ captain america နဲ့တော့တော်တော်တူတယ်ဗျ ..
ဒါပေမဲ့ cap ထက်တော့ဆယ်စုနှစ်နောက်ကျပြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး cap ထက်လည်းအသက်အားဖြင့်များစွာငယ်ပါတယ်။
cap WW2 တိုက်နေချိန် john ကလေးလေးအရွယ်ပါ..
John Walker ဟာ cap လိုပဲ mutate ဖြစ်လာသူတစ်ယောက်ပါ..
John Walker ကို Superhuman ဖြစ်လာအောင် လုပ်ခဲ့တာကတော့ Power Broker,inc.ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစွဲ့အစည်းကနေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Power Broker,inc ဆိုတာက တရားမဝင် Criminal Corporation လုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝွဲ့ဝင် member တွေကို The Power Brokers လို့ခေါ်ပါတယ်။
Leaderကတော့ The Power Broker ဆိုတဲ့သူဦးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Power Broker,Inc.မှာ Mad scientist တွေပဲရှိပါတယ်။ Dr.karl Malus ရယ် Curtiss Jackson ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက်က ဒီအဖွဲ့စွဲ့စအစည်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး.. Superhuman တွေ တရားမဝင် ဖန်တီးနေတဲ့ Secret Base တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
John Walker ဟာ Power Broker member တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.
သူရဲ့ superhuman စွမ်းအားတွေကို အဲ့ဒီကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ hero တစ်ယောက်အရမ်းဖြစ်ချင်တာပါ
ဒါပေမဲ့သူဟာCapကိုသာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Captain America#332 မှာ Super Patriot/John Walker ဟာ သူပုန်လူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ warhead ဆိုတဲ့သူကိုသတ်ပြီး ဝါရှင်တန် ဒီစီ မြို့ကို အနူမြူဖြင့်ဖောက်ခွဲ့မည့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာ Steve Rogers/Captain America ဟာ တရားဝင်အနားယူသွားခဲ့ပါတယ်။
Comic issue#332 ဖြစ်ပြီး issue title က No More Captain America ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် John Walker ဟာ captain America ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်လာပုံကဒီလိုပါ. steve rogers နှုတ်ထွက်အနားယူသွားတဲ့အခါမှာ U.S အစိုးရအနေနဲ့ပြာတောက်သွားတာပေါ့
Hydra အပြင် အခြား အဖွဲ့အစည်းတွေ superhuman villain တွေက ပိုဆိုးလာကြတယ်.. အဲ့အချိန်မှာ C.S.A (Commission on Superhuman Activities အဖွဲ့အစည်းကနေ John Walker ကို New Captain America ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ Power Brokers Membersတွေဖြစ်တဲ့ BUC( Bold Urba Commandos) အဖွဲ့ဟာလည်း တရားဝင် Captain America/John Walker ရဲ့ လက်ထောက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
BUC member တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Battle Star/Lemar Hoskins ဟာ Bucky Jame/ Winter Soldier နေရာအစားဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Captain America/John Walker ရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ပါ.
BUCမှာ member 3ယောက်ရှိပါတယ် ကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့ Right-Winger ရယ် Left-Winger ရယ်ဆိုပြီး heroတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
BUC အကြောင်းလေးပြောပါမယ် BUC ကတော့ captain america maskတွေတပ်ပြီး capကို အသရေဖျက်တဲ့ Power Brokers,Incရဲ့ member တွေဖြစ်ပြီး John Walker ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ John Walker/Captain America နဲ့ Left-Winger နဲ့ Right-Winger တို့ဟာ ရေစက်ကုန်ခဲ့ပါတယ်… ဖြစ်ချင်တော့ Winger နှစ်ကောင်က တကယ်ကို secret လုပ်ခဲ့တဲ့ John Walker ရဲ့နာမည်ကို Public ရှေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာ John Walker/Captain America , Battle Star/Winter Soldier တို့ဟာ Winger ၂ကောင်နဲ့သတ်ကြပါတော့တယ်..
John Walker ရဲ့နာမည်ကို Publicမှာထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ Comicကတော့ Captain America#341(may 1988) ပဲဖြစ်ပါတယ်
Captain America#347 မှာတော့ john walker/captain america ဟာ Left Winger/Hector Lennox ရဲ့အမေကို သူ့နာမည်ကို public မှာသုံးခဲ့တဲ့အတွက်သွားခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့ Left-Winger အမေဟာအမောဖောက်သွားခဲ့ပါတယ်လန့်ပြီးတော့.
အဲ့နောက်မှာ Winger ၂ကောင်ဟာ John Walker နဲ့မကြေပွဲတိုက်ကြပြီးနောက်မှာ ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ winger ၂ယောက်ဟာ ကြိုးတုပ်ပြီး အရှင်လတ်လတ်မီးလောင်သေခဲ့ရာတယ်။
ဒါကတော့ John Walker တစ်ယောက် captain ဖြစ်နေချိန်မှာ လူမဆန်သူရဲကောင်းမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကို လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် John Walker/Captain America ဟာ steve Rogers နဲ့ different role same mission လုပ်တဲ့အခါမှာStever Rogers ဟာ John Walker/captain america ထက်သာနေခဲ့ပါတယ်
မှတ်ချက်:steve Rogers ဟာ Cap ရာထူးမှအနားယူကတည်းက U.S agent suit နဲ့ mission တွေဆောင်ရွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်John Walker/Captain America ဟာ captain title နဲ့မထိုက်တန်ဘူးဟုဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်.. အဲ့အချိန်မှာလည်း Steve Rogers/Captain America ပြန်ဖြစ်လာချိန်ပါ အဲ့ comic ဟာ comic History တစ်လျှောက်မှာ captain America ၂ယောက်ပါတဲ့ ပထမဆုံး comic issue ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် John Walker/Captain America ဟာ အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုမှာ Watchdogs ကလူတွေကသူ့ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ John Walker/Captain Americaဟာ သေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စဟာ CSA(Commission of Superhuman Activities) ရဲ့လှည့်စားမှုဖြစ်ပြီး John Walker ကိုသေပြီဆိုပြီး fake လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါကတော့ John Walker Captain America ဖြစ်ခဲ့စဉ်က Story ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲအခုမှ U.S agent ဖြစ်လာတဲ့ Story လေးစပါမယ်ေ။
U.S Agent လာပြီ…
walker ဟာသူသေတယ်ဆိုတာ Fakeလုပ်ပြီးနောက်မှာတစ်ဖန်ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
Commission ရဲ့ Agent တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာပါ။
သူဟာအရင် steve rogers U.S agent ဘဝတုန်းက ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး U.S agent ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
John Walkerမှာ Steve Rogers/Captain America ကဲ့သို့ပင် Vibranium shield ရှိပါတယ်။ထို့နောက်သူဟာသူ့ရဲ့ first mission အနေနဲ့ Iron Monger နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး Iron Monger ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
U.S agent အနေနဲ့ John Walkerဟာ Captain America#354 (june,1989) မှာစတင်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်သူဟာ သူCaptain America ဘဝကပါတနာတစ်ယောက်က ပါတနာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ battle Star ကို Power Broker ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်သူ့မိဘရှိရာအရပ်ကို Battle star နဲ့တူတူသွားတဲအ့ခါ သူ့မိဘ၂ပါးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Power And Abilities and equipments
U.S Agent ဟာ Super Patriot ဘဝမရောက်ခင်ကတည်းက ထူးချွန်တဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Power Broker,inc. ရဲ့စမ်းသပ်မှုပြီးနဲ့နောက်မှာ Superhuman ဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
Superhuman Stamina-လူတွေသတ်မှတ်တဲ့အဆင့်ကိုကျော်ပြီး stamina ကောင်းပါတယ်။
ပြီးတော့ U.S agent ဟာရ Taskmaster ဆီကနေလဲ Combat training ကိုသင်ထားတာဖြစ်ပြီး Martial art လည်းတတ်ပါတယ်။
ထို့နောက်သူဟာမည်သည့် Shield ကိုမဆိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြနိုင်ပြီး shield တော်တော်များများကိုလည်းကိုင်ဖူးပါသေးတယ်။
သူလက်ရှိကိုင်တဲ့ shield ဟာ Alternate Universe က Steve Rogersရဲ့ Shield ဖြစ်ပါတယ်။ Earth-13584 ကပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်သူဟာ Shield ကို U.S agent design ဆေးသုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကိုင်ဖူးတဲ့ Shield တွေကတော့
Vibranium Star Shield
Captain America shield (Steve Rogers Shield ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Force Works ဆိုတာကတော့ Tony Stark (Iron Man) ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ပွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် Force Worksထဲကို Scarlett Witch ရဲ့ invitation နဲ့အတူ John Walker/ U.S agent ဟာ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
S.H.I.E.L.D အဖွဲ့နဲ့နဲ့ tony stark တို့ဟာ John Walker အတွက် Energy Shield အသစ်စက်စက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။
Force Works ဆိုတာကတော့ Avengers လိုသီသန့်အဖွဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ west coast avengers အဖွဲ့ disabled ဖြစ်ပြီးနောက် ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Force Works ကAvengers တွေလိုပဲ Villain တွေလိုက်လံနှိမ်နင်းတဲ့အဖွဲ့ပါ..
John Walkerဟာ Force Works နဲ့အတူmission ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Force Works Leader ကတော့
Scarlett Witch တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ေ။
Original member တွေကတော့
The Jury (U.S agent asaleader)
U.S agent ဟာ the jury အဖွဲ့ရဲ့ leader ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ The jury အဖွဲ့ကွဲ့ကကို U.S agent ကဦးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Jury အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရခြင်းက Thunderbolts အဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
The Jury အဖွဲ့သားများဟာဆိုရင်တော့ Amored အပြည့်စုံပြီး အဖက်ဖက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ ThunderBolts အဖွဲ့ကိုအနိုင်ရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး.. The Jury အဖွဲ့ထဲဝင်ခိန်မှာ U.S agent ဟာ Energy Energy Shiled အစား Eagle shaped Shiled ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ The Jury နဲ့ ThuderBolts အဖွဲ့ပူးပေါင်းသွားပြီ Brute Force အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
U.S agent ဟာ The Jury အဖွဲ့အွဲ့အတွင်းရှိနေစဉ်မှာ Protocide ဆိုတဲ့ Superhuman တစ်ယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းသေမလိုထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
The Jury အဖွဲ့ရဲ့ွ့ရဲ့ Member တွေကတော့
S.T.A.R Agent ဖြစ်လာခြင်းနှင့် Avengers များကိုကူညီခြင်း…
John Walkerဟာ U.S အစိုးရရဲ့ရ အဖွဲ့အစွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ S.T.A.R အဖွဲ့ member တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
Avengers များအပါအဝင် cosmic hero များစွာဟာ kree invasion တစ်ခုနဲ့ပြသာနာတက်နေကြပါတယ်။ Kree တွေက ကမ္ဘာကို လာသိမ်းတာပါ။
Ronan နဲ့ Kree တွေက alien species များစွာနဲ့ Earth လာတိုက်ပါတယ်။ Ronan နဲ့အတူ Kree တွေရဲ့ Leader ဖြစ်တဲ့ Supreme Intelllenge ကြီးပါ ပါလာခဲ့ပါတယ်။
U.S Agent အကူညီနဲ့ Ronan ကိုအနိုင်ရပြီး Kree စစ်တပ်ကြီးကိုအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ U.S agent လည်း ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
Avengers တွေဟာ U.S agent/John Walker ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ John တစ်ယောက်ကတော့ အဖတ်တောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး..
maximum security vo.1 comic ပဲဖြစ်ပါတယ် issue#3 ခုပါဝင်ပါတယ်။
John Walker/U.S agent ဟာ Invaders အဖွဲ့ကို join ခဲ့ပါတယ်။ join တာကတော့ကူညီချင်လို့ Join တာထက် captain america/Steve Rogers ကိုလိုက်ပြိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
suitကိုတောင် capလိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ shield ကိုတော့ ကြယ်ပုံစံ shield အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
leadershipကို လုနေလို့ steve က 3ယောက်တစ်ဖွဲ့တောင်လုပ်ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
Invaders အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရခြင်းက အကြီးမားဆုံးသော သူပုန်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ pterorists အဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖွဲ့ကို Axis Mundi ကဦးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ပွဲအတွင်းမှာU.S agent တို့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာ Human Torch(A.I ) ဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Invadersအဖွဲ့ဲ့ member တွေကတော့
U.S Agent/John Walker
Silver Scorpion တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
U.S Agent/John Walker ဟာနောက်ထပ်သေလုနီးပါအခြေနေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲ့တာကတော့ Thunderbolts အဖွဲ့ကိုလိုက်နှိမ်နင်းချိန်မှာ ThunderBolts ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Nuke/Scourge ရဲ့တိုက်ခိုင်းတာကိုခံရပါတယ်။
အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ U.S agent/John Walker ဟာ ဘယ် လက်တစ်ဖက် ခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် john တစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး hero ဘဝကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Hero ဘဝကနေအနားယူပြီး ထောင်တစ်ခုမှာထောင်မှုးဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။
Dark Avengers တော့ marvelရဲ့ darkပိုင်းသွားတဲ့ Team တစ်ခုဖြစ်တယ်။
member တွေကလည်းတကယ့် badass တွေချည်းပဲ။ Dark Avengers နဲ့ H.A.M.M.E.R တို့ဟာ Avengers နဲ့ S.H.I.E.L.D တို့ပြိုကွဲပြီး ဖြစ်တည်လာတဲ့အဖွဲ့ွ့တွေဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Villain တွေများစွာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ွ့တွေပါ။
U.S Agent ဟာ New Dark Avengers ရဲ့ Leader ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Dark Avengers ရဲ့ Original member တွေကတော့
Skaar(Son of Hulk)
နောက်ပိုင်းမှာ New Dark Avengers ဖြစ်တည်လာပါတယ်။ Dr. Doxie ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ John Walker/U.S agent ရဲ့ပျက်သွားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကိုကုစားဖို့ Venom symbiote ကို Multiverse(13584) ကဟာကို John Walker မှာကပ်စေခဲ့ပြီး ဘယ်လက်နဲ့ ဘယ်ခြေထောက်ကို ပြန် healing ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ John Walkerဟာ New Dark Avengers အဖွဲ့ရဲ့ Leader တစ်ယောကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
John Walker တစ်ယောက်ဟာသေဆုံးသွားတဲ့ သူ့မိဘ၂ခါပုံကို shield မှာအမြဲကပ်သွားလေ့ရှိပါတယ် ။❤️
Invaders comic မှာဖတ်ရင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
MCU မှာတော့ U.S agent ကို Wyatt Russell က သရုပ်ဆောင်ထားတာပါဖြစ်ပါတယ်။
MCU တွင် U.S agent ကိုthe falcon and the winter soldier TV Seires တွင်စတင်ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Wyatt Russellနှင့်လည်း ‌အတော်လိုက်ဖက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
(written by skullmask)
Continue reading “U.S Agent အကြောင်း”
Comic fact Explain Marvel
Deadpool Samurai Manga Review
No Comments on Deadpool Samurai Manga Review
Manga တစ်ခုထဲကို Deadpool တစ်ကောင်ရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးဘူးကြလားဗျ
4th world breaker တွေသိပ်မရှိတဲ့ Shonen Jump နဲ့ Marvel တို့ Collab ထားတဲ့ Deadpool Samurai Manga နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Deadpool Samurai Manga ကိုတော့ Dec 10,2020 မှာ Shonen Jump + မှစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး 2021 ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ Manga တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်
အဲ့တာကြောင့်ပဲ one shot manga ကနေ full series အဖြစ်ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါပြီးအခုလက်ရှိ ongoing manga တစ်ခုပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Deadpool တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ Samurai Squad ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လူလိုက်စုတယ်လို့ပဲအကျဉ်းချုံးပြောပါရစေ
Deadpool Manga ဆိုပေမယ့်တခြားသော Marvel Character တွေအများကြီးကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်
Marvel Character အချို့ကို Alternate Version အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာပြောရရင် Spider-Man ကို Sakura Spider ဆိုပြီး Waifu version မြင်ရမှာပါ
4th Wall ရှယ် Break
Deadpool ဆိုတဲ့အတိုင်း 4th wall ကိုရှယ် break ပြီးတခြားသော Manga တွေ Shonen Jump Character တွေကိုနောက်ပြောင်နေတာကအတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်
Shonen Character တွေကိုပါ Manga ထဲဆွဲသွင်းလာတာကတော့တကယ်ကို surprise moment ကြီးပါပဲ
Deadpool ကြီးရဲ့ Shonen trope တွေကိုင်တွယ်ပုံကတွေ့ဘူးသမျှ Shonen Character တွေနဲ့ကွဲထွက်နေတာကြောင့် manga reader တွေအတွက်လဲအသစ်အဆန်းဖြစ်စေမှာပါ
အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ 4th wall breaking ability ကအတော်လွန်လွန်းနေလို့ပါပဲ
Gintama နဲ့တွေ့ပြီးနှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ writer တွေနဲ့ reader တွေနေစရာ‌ေေနရာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူ…
Chaotic comedy and action တွေကြောင့်ဖတ်ရင်းနဲ့လဲပျင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး ဖတ်ရတာတကယ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်ဗျ
ကျနော်ကတော့ rating 9/10 အထိပေးပါတယ်
Sanshirou Kasama နဲ့ Hikaru Uesugi တို့မှဖန်တီးထားပြီး free to read ဖြစ်တဲ့အတွက် Deadpool ရဲ့ Marvel ကကွဲထွက်နေတဲ့ Manga story ကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ
Manga နဲ့သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ Superhero fan တွေဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right to left ဖတ်ဖို့သတိပေးလိုက်ပါရစေ
ဘယ်ကနေဖတ်ရမလဲမသိရင်ကျနော်တို့ရဲ့ Page chat box မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
အကယ်၍ Thor သာ နှင်းဘီလူးတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်? (What if)
No Comments on အကယ်၍ Thor သာ နှင်းဘီလူးတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်? (What if)
MCU what if Seiresဟာလည်းမကြာမှီထွက်ရှိတော့မှာမလို့ ဒီနေ့မှာ အကယ်၍ Thor သာ Asgardမှာမဟုတ်ပဲ နှင်းဘီလူးတွေရဲ့ တိုင်းပြည်မှာကြီးပြင်းခဲ့လာရရင်လယ်လိုဖြစ်မလဲ ? အကျိုးဆက်ကရောဘယ်လာမလဲဆိုတဲ့တွေးစရာတွေပေးမဲ့ what if ? Thor was Raised By A Frost Giants ဆိုတော့ comic story ကိုတင်ဆက်ပေးလ်ုက်ပါတယ်။
What if thor was raised byafrost giants
ဒီ Comic ကိုတော့ December,2018 မှာ published လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
What if ရဲ့နာမည်ကြီးထဲကတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး
What if တိုင်းဟာ အကုန် Counterpart တွေ မတူညီတဲ့ Reality တွေနဲ့ တွေးစရာအမျာကြီးပေးတတ်ပါတယ်…
ဘာလို့ဆို ကိုယ်အစအဆုံးဖတ်လာတဲ့ Reality ကိုတခြား Reality တစ်ခုအနေနဲ့ ခံစားရမှာမလို့ပါ….
Asgard ဟာ Frost Giants တွေ ကျုးကျော်တာကိုခံနေတဲ့အချိန်တစ်ခု..
Asgardian တွေအရေးနိမ့်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာ All Father Odin ရှာရှေ့တန်းမှာ Frost Giant တွေနဲ့ တိုက်ပွဲကို အဆုံးထိတိုက်ခိုက်နေပါတယ်.
နောက်ဆုံးမှာ All Father Odin ကြီးတစ်ယောက်ဟာ King of Jotunheim ဖြစ်တဲ့ Laufey နဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ရပါပြီ..
အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲကြီးမှာ Odin ရဲ့ ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
All Father Odin ဟာ King Laufey ရဲ့ Ice Crusher တူကြီးလက်ချက်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်…
ဒါဟာ Thor အပါအဝင် Asgard တစ်ခုလုံးရဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လို့လာခဲ့လေပြီ…All Father Odin သေဆုံးပြီးသည့်နောက်မှာ Frost Giants တွေဟာ Asgard ကို ဝင်ရောက်ကျုးကျော်ဟာ Asgard တစ်ခုလုံးကိုဖျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် King Laufey ဟာ Thor ပေါက်စလေးကို asgard မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းသားကို မသတ်ခဲ့ပါဘူး။
King Laufey ဟာ Thor ကိုသားအရင်းသဖွယ်မွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Asgard ကိုဖျက်စီးပြီးသည့်နောက်မှာ Laufey ဟာ Thor ကို Jotunheim သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Thor ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့အဖေအတွက် သူ့တိုင်းပြည်အတွက်ရယ် လက်စားချေအမုန်းပွားနေတဲ့စိတ်တွေ တော့ သိုသိပ်ပြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
Thor ဟာ Frost Giant တိုင်းကိုမုန်းတီးနေပေမဲ့ Loki လေးကိုချစ်ရှာပါတယ်…
Loki ကိုညီအရင်းတစ်ယောက်လိုချစ်ခင်ပြီး တခြား Frost Giant တွေနဲ့တောင် မတူဘူးလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
Loki ဟာလည်း Thor ကိုအကိုအရင်းကဲ့သို့ချစ်ခင်ပြီး နားလည်မှုရှိပါတယ်
Loki နဲ့ Thor ဟာKing Laufeyရဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုအတူတူ လုပ်ကြရပါတယ်.. အဲ့တာကတော့ Frost Monster တစ်ကောင်ကိုသတ်ရတာပါ..
Loki လေးဟာ Frost Monster ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေချိန် Thor ဟာ Frost Monter ကို Thunder Strike နဲ့ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်.
King Laufey ဟာ Thor ကိုယုံကြည်သလို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ Loki နဲ့ အားနည်းနေတာကိုသဘောမကျလို့ Thor ကိုပဲ Jotunheim ရဲ့New King ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်
THOR ဟာ ကလေးဘဝကတည်းက thunder strike ကိုသုံးနိုင်တာပါ။
တခြား Frost Giant တွေဟာ ရန်သူရဲ့လကကျန်တစ်ယောက်နန်းတက်မှာကိုမနာလိုကြပါဘူး..
Loki ကတော့ အပယ်ခံအနေနဲ့ပဲနေခဲ့ရပါတယ်။ Laufey ကလည်း Loki ကို အမြင်မကြည်ပါဘူး။
Lady Freyja စီ မှော်ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ Loki
Loki ဟာ အပယ်ခံတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီးသူ့ magic power ကိုအသုံးမကျဘူးထင်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Thor ရဲ့ stepmom Lady Freyja နဲ့တွေ့ဆုံကာ magic များစွာကိုတတ်မြောက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Laufey က Lady Freyja ကိုမသတ်ပဲထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းချထားတာပါ။
Loki ဟာလည်း Lady Frejya ကိုအမေအရင်းကဲ့သို့ချစ်ခင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာ Thor ဟာ Laufey ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝရလာပါတော့တယ်။
THOR ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်ကလို Frost Giant တွေကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်မရှိတော့ကာ ဘုရင်လောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာနေခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် Laufeyဟာ Thor ကို Odin ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ Ice Crusher ကို Thor ကိုပေးခဲ့ပါတယ်
ICE CRUSHER ကတော့ Mijolnir နဲ့ပုံစံတူပေမဲ့ သူက worthy ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး..
သူက blast ပစ်ရင် ပစ်ခံရသူဟာ ခဲကာ ရေခဲရုပ်ဖြစ်ကာကွဲသေသွားပါတယ်။
thor သုံးရင်တော့ မိုးကြိုးပါထွက်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ Laufeyဟာ Thor ကိုခေါ်ပြီး Asgard ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ပျက်စီးနေတဲ့ Asgard ကြီးကိုလိုက်လံပြရင်း မထင်မှတ်မဲ့ Loki ရယ် Lady Freyja ရယ် ဟာ Midgard ကိုထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
LAUFEY ဟာ ဒေါသကြီးစွာ သတ်ပြီး Loki ကိုရန်သူနဲ့ပေါင်းရလားဆိုတာ သတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Loki ဟာ Laufey ကို မျက်လုံး ဓားနဲ့ထိုးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ THOR ဟာ Loki အပေါ်သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်လို့အမြင်လွဲကာ Blast နဲ့ လိုက်ပစ်ပေမဲ့ Loki ကိုမထိကာ Lady Freyja ကိုသွားထိကာ Lady Freyja ဟာခဲကာ ကြွေကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Thor ရော Loki ရော အမှားကိုယ်စီဖြစ်သွားခဲ့ပြီ..
Thor ဟာလည်းအမေရော မွေးစားအဖေတစ်ယောက်လုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ..
Loki ဟာ Thor ကို Midgard လိုက်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ Thor ဟာလိုက်ချင်ပေမဲ့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်.. ဘာလို့ဆို Laufey သေတော့ သူက ဘုရင်အသစ်ဖြစ်တော့မှာ..
သူ့တိုင်းပြည်အတွက်သစ္စာရှိရတော့မှာ.. သူ့ပြည်သူတွေကို dark elves တွေ hell demon တွေလက်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ သူရှိနေမှဖြစ်မယ်ဆ်ုတဲ့ ဘုရင်ကောင်း နတ်ဘုရားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကြောင့် Thor က Loki ကိုသာ Midgard ကိုထွက်ပြေးစေခဲ့ပါတယ်။
Thor ကတော့ ဆုံးရှံးမှုများစွာနဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ Asgard အပျက်ကြီးပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။…
Loki ကတော့ ဒီအကြောင်းတွေကို Midgard ကကလေးတွေကိုပြောရင်း ကောင်းကင်းကြီးကိုကြည့်ရင်း ဒီ What if ? ကတော့ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီWhat if? ကတော့ အတွေးတော်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Thor တစ်ယောက်သာ အခုလို ဘုရင်ဖြစ်သွားရင် နောက်ပိုင်း midgard ကိုဘယ်လို ရန်တွေကျလာမလဲ? တခြား avengersတွေနဲ့ ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်ရင်အများကြီးပါပဲ…
ဒီ what if ဟာ လာမည့် What if animation ထဲမှာပါသင့်တဲ့ထဲကတစ်ခုလို့လည်းမြင်မိပါတယ်။
ကဲဒီ what if လေးကို ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ?
ကဲ… အဆုံးထိဖတ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါ။
မနက်ဖြန်ထွက်မယ့် MCU ရဲ့ What if…? Animation series ကိုလဲ Breakdown တွေတက်တိုက် လုပ်ပေးသွားမှာမို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ…
No Comments on Thor ရဲ့အမေအရင်း
Thor ဟာ marvel မှာ အမေရေးရာနဲ့ ဂျင်းအထည့်ခံရဆုံး နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှာ‌တော့ Thor ရဲ့အမေဟာ Gaea ဆိုနဲ့ Earth Goodness မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အစက ချစ်ဖေကြီး Odin ဟာ Lady Frigga ဟာ Thor ရဲ့အမေအရင်းဆိုပြီး မွေးကတည်းကဂျင်းထည့်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ‌နောက်မှာတော့ Thor ဟာ သူဟာ Elder Godsတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gaea ရဲ့သားမှန်းသိခဲ့ပါတယ်။
History Of The Marvel Universe Comicတွင် Thor ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုပြီး ဒဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ goodness နဲ့ All-Fatherတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးပေါ့။
အခုနှစ်ပေါင်း billion ချီပြီးနောက်မှာတော့ Odin ရဲ့ခြေရှုပ်ထားတဲ့ ရှင်းတမ်းတွေထွက်လာပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Earth မှာ အစောဆုံး Avengers Team က One Million Year ago တုန်းက Odin ဦးဆောင်တဲ့ Avnegers အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ avengers အဖွဲ့ဟာ celestial beings တွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Odin ကြီးဟာ lady Phoenixနဲ့ သဘောထားမျှပြီး lady frigga မသိအောင်ခိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Lady Phoenixကတော့ Earth မှာအစောဆုံး mutant တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ earth က Phoenix Host တွေထဲလည်းအစောဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
LadyPhoenixဟာ Thor ရဲ့အမေအရင်းဖြစ်နေပါတယ်။ချစ်ဖေကြီး Odin ဟာ Thor ကိုနှစ်ပေါင်းသန်းချီလိမ်ညာထားခဲ့တာပါ။
Reader တွေကိုပါ Marvelက ဖျင်ချလိုက်သလိုပါပဲ။
Thor ဟာတကယ်တော့ Phoenix blood ပါပြီး နတ်ဘုရားတစ်ဝက် Phoenix တစ်ဝက်ပါပဲ။ lady Phoenix ဟာ mjolnir ကို worthy ဖြစ်တာမဆန်းတော့ပါဘူး ။ သူမဟာ Thor ရဲ့အမေအရင်းဖြစ်နေတာပါပဲ။
Thor အနေနဲ့ Asgardကို Phoenix Invasionတုန်းက နိုင်ခဲ့တာလည်း Phoenixတစ်ဝက်ဖြစ်နေလို့နိုင်ခဲ့တာပါဘဲ။
Avnegers: Enter The Phoenix Eventတွင် Phoenix က Earth ကိုတစ်ဖန်ပြန်လာပြီး Host ရှာတဲ့အခါမှာ Lady Phoenixနှင့် Thor နှင့် တွေ့ခဲ့ပြီး Odin ရဲ့ဂျင်းကိုရှင်းပြခဲ့‌တော့တယ်။
Lady Phoenix နှင့် Thor တို့ဟာ တွေ့ဆုံပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲခွဲာခွာခဲ့ရပါတယ်။ Phoenixကြီးသောင်းကြမ်းလာတဲ့အခါမှာ Phoenix ကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီး ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီတော့ Thor ဟာသူ့အမေအရင်းကိုနှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီမှသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Odin ဟာ Thor ကိုဂျင်းအထည့်ဆုံး တစ်ဦးတည်းသောဖခင်ပါပဲ။
Mjolnirကလည်း လူတိုင်းကကောက်မ အမေတွေကလည်း Odin ကြောင်းများပြားနေတော့ Thor ကိုတကယ်သနားမိလာပါတော့တယ်။
Thor ဟာ God Of Thunder ဆိုတာထက် သူ့အမေဟာ bird of thunder လို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
(Avengers: Enter The Phoenix)
Comic fact DC
Most powerful weapons of DC
No Comments on Most powerful weapons of DC
Powerless heroတွေလဲအများအပြားရှိသလိုpowerless supervillainတွေလဲဒုနဲ့ဒေးပါ
Helmet of fateကတော့powerful ancient magicalအသုံးအဆောင်ပါ။ Lord of orderကြီးNabuကနေပြီးAmulet Of Anubis, Cloak Of Destinyတို့နဲ့အတူဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ပစ္စည်း၃ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဝတ်ဆင်သူကိုtop tier magic powerတွေရစေပါတယ်။
Powerတွေကတော့infiniteနီးပါးအထိmagic powerရယ်၊telekinesis,flight or levitationစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်strengthကိုပါမြှင့်ပေးတယ်၊attackအများစုကိုကာကွယ်ပေးတယ်၊magic spellတွေကိုအစွမ်းတွေဆတိုးပွားစေတယ်။
Helmetကနေတခြားဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့နက္ခတ်ဗေဒအကြားအမြင်မျိုးရနိုင်တယ် dimensionနဲ့energyတွေကိုအသုံးချနိုင်တယ် ပစ္စည်းတွေကိုပုံပြောင်းနိုင်တယ် time travelလား teleportလား အချိန်မရွေး နေရာမရွေးသွားလို့ရပါတယ်
ဆိုတော့ကာဒီhelmetလေးဝတ်ရုံနဲ့တင်most powerful beings ထဲဝင်သွားမှာပါပဲ
ဒါကတော့အားလုံးသိမှာပါ ringတွေကဝတ်ဆင်သူတွေရဲ့ခံစားမှုနယ်ပယ်အလိုက်အသုံးချခံပါတယ် originalကတော့Green Lanternပေါ့ သူကတော့willpowerကိုသုံးပါတယ်
ကြာလာတော့universeမှာပျံ့လာပြီးemotionအလိုက်ringတွေကွဲလာပါတယ် ringတွေမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ် အများစုကတော့constructတွေလုပ်ကြတယ်ဗျ သူတို့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့လေ
Force fieldတွေလုပ်တယ် energy blastတွေပစ်တယ်ပေါ့ အများအစားခွဲကြရအောင်
အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဒါကPhilosopherရဲ့ကျောက်တုံးတစ်ခုပါပဲ ဒါပေမယ့်တော်တော်ကိုကြမ်းပါတယ် upgradeချက်တွေက
ဒီဟာကဘာလုပ်နိင်လဲဆိုရင်အကုန်လုပ်နိုင်ပါတယ် အတွေးမှန်သမျှကိုတုံ့ပြန်ပါတယ် realityကိုခြယ်လှယ်လို့ရတယ် စိတ်ကူးနိုင်တာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်
ဒါ့အပြင်သူ့ကuniverse in four dimensionsကြီးရဲ့မြေပုံအပြည့်အစုံလဲဖြစ်ပါတယ်
ဘာကြီးလဲဆိုတော့စက်ကြီးပါ ဂြိုလ်တစ်လုံးလောက်အရွယ်အစားစက်ကြီးပါ Warzoonတွေရဲ့homeဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကျတော့မှMongulကြီးကသိမ်းသွားတာပါ
တကယ်တော့controlခုံမှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီးထိန်းရုံပါပဲ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ မျိုးစုံသုံးလေဆာတွေ ရှိသမျှလက်နက်အကုန်လုံးကိုဂြိုလ်လောက်ကြီးအထိစုပြုံထားမှတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းကိုမသိပါဘူး အကြီးဆုံးစက်လက်နက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ဒါကြီးကတော့အစက Shazam ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ် နောက်ကျတော့ Seven Deadly Sins ကိုချုပ်ဖို့သုံးခဲ့ပါတယ်
အဲ့ကောင်တွေနဲ့တခြား demon တွေကိုထည့်လိုက်တော့မှပိုပြီးစွမ်းလာတာပါ ဒါကြီးကEarthပေါ်ကMagicတွေအားလုံးရဲ့Focal Pointကြီးပါ Shazamကြီးမျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးဖြစ်နေတာကိုပဲကြည့်ပါတော့
ဆိုတော့EarthကMagic Powerအားလုံးကိုရနိုင်ပါတယ် Seven Deadly Sinsလိုကောင်တွေပါထည့်လိုက်တော့ကြမ်းသထက်ကြမ်းသွားတာပါ
Black Adam ဟာလဲRock of Eternityဆီကိုရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
Black Adam အကြောင်း
ThanosမှာInfinity Gauntlet DarkseidမှာAnti-life Equationလို့ပြောလို့ရပါတယ်
Emotional Objectတစ်ခုဟာအာရုံဆိုတာမရှိတော့တာ ဘယ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမှရောက်မနေတာမျိုး ဒါကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးထွက်ရပ်ပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်အာရုံရှိတဲ့သက်ရှိမှန်သမျှကိုကြိုက်သလိုစေခိုင်းလို့ရပါတယ်
Universeကိုခြယ်လှယ်ချင်တဲ့Darkseidကြီးအတွက်တော့အကြိုက်ပေါ့ Mathematical Proofကိုပြရမယ်ဆိုရင်
Anti-Life Equationမှာတွဲဖော်တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့Life Equationဆိုတာလဲရှိပါတယ်
companionship + understanding + assurance + joy + altruism ÷ respect ÷ commendation ÷ sympathy x innocence x dignity x success x acceptance y=n where y=despair and n=caution, love=truth, ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့JL memberတွေGodတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အချိန်Knowledge Godဖြစ်တဲ့စူပရင်းသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဘတ်ဘတ်ဖင်ခုထိုင်ခဲ့တဲ့Chairပါ(ဖင်ဘဝင်မြင့်တဲ့ငဘတ်)
တကယ်ကတော့New God Metron teleportလုပ်ဖို့ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးMother Boxနဲ့Father BoxလိုပဲElement Xနဲ့လုပ်ထားတာပါ
ဒီခုံကတော့အလန်းစားစပယ်ရှယ်abilityတွေရှိပါတယ် ဒါကြောင့်လဲငဘတ်ကတက်ထိုင်တာပါ Spaceထဲလျှောက်သွားချင်လဲရတယ် time travelလဲရတယ် တခြားdimensionတွေထိသွားလဲရတယ် ခြေရာခံရောင်ခြည်တွေပစ်ပြီးဂြိုလ်တွေကိုလိုက်စပ်စုလို့ရပါတယ်
သူ့ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူကိုလဲအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးပါတယ် techစောက်ဆန်းကြီးတွေပါထွင်နိုင်ပါတယ် Wally Westတစ်ယောက်လဲအသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်
Mother And Father Boxes
မေမေနဲ့ဖေဖေရဲ့သေတ္တာတွေကတော့Element Xနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးNew Genesisကသိပ္ပံပညာရှင်Himonကတီထွင်ခဲ့တာပါ သူတို့အလုပ်လုပ်တာကတော့အာရုံခံsupercomputerတွေလိုပါပဲ
DC Universeမှာရှိသမျှတစ်ကောင်တစ်မြှီးမှနားမလည်နိုင်တဲ့powerတွေရှိပါတယ် Mother Boxမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်သူမှရေရေရာရာမပြောနိုင်ပါဘူး
အဲ့လောက်ထိusefulဖြစ်ပါတယ် Boom Tubeတွေဖန်တီးပြီးMultiverseတစ်ခွင်ပြဲပြဲစင်အောင်လျှောက်သွားလို့ရပါတယ် Healingတွေလုပ်နိုင်တယ် Gravitational Constantတွေကိုသမလို့ရတယ် Energy Formတွေကိုတစ်နေရာကနေတစ်နေရာပို့နိုင်တယ် အလင်းထက်မြန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ် သက်ရှိတိုင်းရဲ့life forceတွေကိုခြယ်လှယ်နိုင်တယ် ပြီးတော့cyborgကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဆိုလဲမမှားပါဘူး
ဒါတွေကိုJustice League filmနှစ်ခုလုံးမှာသေချာမြင်ခဲ့ရမှာပါ
ဒီလှံကတော့Jesusကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တင်တုန်းကသူရဲ့နံကြားကိုထိုးခဲ့တဲ့လှံပါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကHitlerကAmerican Superheroeတွေကိုတတိယဂျာမာန်အင်ပါယာကိုမထိနိုင်အောင်လုပ်ဖို့သုံးခဲ့ပါသေးတယ်
ဒီလှံကိုကိုင်တဲ့သူကတောsuperpowerရှိတဲ့့သက်ရှိတိုင်းကိုmind controlလုပ်နိုင်မယ် အဲ့တော့ဘယ်သူဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်းခွေးလေးလိုကြိုးနဲ့ဆွဲကာခေါ်သွားလို့ရပါတယ် အကြမ်းဆုံးကောင်တွေကိုမွေးထားလိုက်ရင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါပြီ
ဒီစက်ကတော့Controllerတွေကသစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ကိုနှိမ်နင်းပေးတဲ့အတွက်Legion Of Superherosအဖွဲ့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ် Content အမိုက်စားတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။